Mowqifka Farmaajo ee Dekedda Berbera ma cadda | KEYDMEDIA ONLINE
Mowqifka Farmaajo ee Dekedda Berbera ma cadda
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo oo weli caddeyn la' doorka uu ku leeyahay ballaarinta dekadda Berbera ee ay Somaliland maamusho!
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo isagoo ka xun tallaabada horumarineed ee loo qaaday ballaarinta dekadda Berbera ee ay maamusho Somaliland, ayuusan weli si rasmi ah u caddeyn karin doorka uu ku yeelan lahaa iyo tallaabooyinkii uu qaaday!
Mashruuc saddex geesood ah ayaa lagu ballaariyay dekadda Berbera, Somaliland DP World iyo Itoobiya ayaa heshiis rasmi ah wada galay, billowgii heshiiska madaxweyne Farmaajo ayaa diiday inuu saxiixo heshiiska, isagoo ka xun in shirkad laga leeyahay waddanka Isu-tagga Imaaraatka Carabta ay qeyb weyn ku yeelato heshiiska iyo sidoo kale in Somaliland oo u muuqata dal madax-bannaan ay qeyb ka tahay heshiiska. Hayeeshee saaxiibkii Abiy Axmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa lug ku leh, waana sababta keentay in uu la aamuso doorkiisa ku aaddan dekadda Berbera.
Waxaa jiray qaraar kasoo baxay Baarlamaanka ee xaaraantinimeeynayay heshiiska DP World iyo Somaliland ee dhismaha dekadda Berbera, kaasoo la meel mariyay March 2018. Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa diiday inuu saxiixo qaraarka labada gole ee la meel mariyay. Inkastoo la leeyahay waxaa arrintaasi ku cadaadiyay RW Abiy Axmed oo qeyb ka ah heshiiska lana siiyay 19% dekadda Berbera.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BJFS Mudane Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay Farmaajo in uu saxiixay toddobo sharci oo aan soo wada marin labada gole, qaraarka kaliya ee Golaha Shacabka iyo xukuumadda ay usoo gudbiyeena isagoo aan saxiixin ayuu hoosta dhigtay madaxweyne Farmaajo.
Heshiiska qaybsiga dekedda Berbera wax talo ah lagama siin dowladda Soomaaliya, waxaana la meel mariyay iyadoo la adeegsanayo heshiis ay saxiixeen Madaxweynaha Somaliland Muse Biixi Cabdi, Shirkadda DP World iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo isku qaatay kiisii iyo kan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo!
Haddaba maxay tahay sababta keentay in uu caddaan waayo mowqifka Farmaajo ee dekedda Berbera?
Waxaa loo maleenayaa in madaxweyne Farmaajo uu ka baqanayo in uu jabo heshiiska saddex geesoodka Soomaaliya Eratariya iyo Itoobiya, maadaama heshiiskan lagu ballaariyay dekadda Berbera uu qeyb ka yahay Abiy Axmed, balse waxaa la isweydiinayaa sida uu ku aqbalay ama uga aamusay laguna fuliyay heshiiska dhismaha ballaarinta dekadda Hobyo iyadoo ay qeyb ka tahay shirkad laga leeyahay waddan uu u aqoonsaday in ay cadaw ku tahay Soomaaliya!